Dowladda Soomaaliya oo beenisay in ay shirkaddaha Fly Dubai iyo Air Arabia ka joojisay in ay duulimaadyo ka sameeyaan Soomaaliya - Somali Link Newspaper
Dowladda Soomaaliya oo beenisay in ay shirkaddaha Fly Dubai iyo Air Arabia ka joojisay in ay duulimaadyo ka sameeyaan Soomaaliya
Sabti, Agoosto, 21, 2021 (HOL) – Wasaaradda gadiidka iyo duulista hawada dowladda Federaalka Soomaaliya, waxay ay beenisay in ay jiraan amar ka soo baxay Wasaaradda kaas oo dalka lagaga joojiyay shirkadaha diyaaradaha ee Fly Dubai iyo Air Arabia.
Wasaaradda waxay ugu digtay warbaahinta wararkaas ay been abuurka ku sheegtay faafinaya inay joojiyaan, si aan bulshada Soomaaliyeed loo maran habaabin.
Warar lagu faafiyay baraha bulshada ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay diyaaradaha Fly Dubai iyo Air Arabia ku xirtay ilaa inta ay ogolaansho rasmi ah ay ka helayaan Hay’adda duulista Soomaaliya, in aanay wax duulimaad ah ka sameyn karin gudaha dalka.
Go’aanka dowladda kasoo saartay shirkaddahan ayaa soo baxay 31dii july ee sannadkan, inkastoo dowladdu beenisay warkaan.
Labadan shirkaddood ayaa duulimaadyo rasmi ah horay uga billaabay magaalada Hargeysa ee Somaliland.
Previous articleShirka golaha wadatashiga qaran ee doorooshooyinka oo Muqdisho ka furmay
Next articleShirka Golaha Wadatashiga Qaran oo Maanta ka furmaayo magaalada Muqdisho